Home Wararka Baraawe oo Lagu soo Doortay Xildhibaanno Hoobiyayaalna lagu Garaacay.
Baraawe oo Lagu soo Doortay Xildhibaanno Hoobiyayaalna lagu Garaacay.
Magaalada Baraawe oo hoobiyayaal lagu garaacay ayaa waxaa lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliya ee ay deegaan doorashadooda tahay degmadaasi.
Doorashadan oo noqoneyso tii ugu horreysay ee deegaan doorashada labaad ayaa waxaa ku soo baxay xildhibaano cusub, kadib doorasho ka dhacday Baraawe.
Kuraasta doorashada la qabtay ayaa kala ah:- Hop-165, Hop-161, Hop-044, Hop-016 iyo Hop-152 kuwaas oo aan loo gelin tartan adag.
Sidaan ayaana logo soo kala baxay:
1-Hop-165: Waxaa ku guuleystay Saalim Caliyow Ibrow oo helay 70 cod
2-Hop-161: Waxaa ku guuleystay Yuusuf Maxamed Aadan oo helay 80 cod
3-Hop-044: Waxaa ku guuleysatay Maryan Maxamed Cali oo heshay 73 cod.
4-Hop-016: Waxaa ku guuleystay Xuseen Cali Xaaji oo helay 81 cod.
5- Hop-152: Waxaa kuu guuleystay Cabdulaahi Cumar Abshirow oo helay 83 cod.
Doorashada ayaa haatan sii soconeyso, waxaana la guda-galay kuraasta kale ee xigta ee loo qorsheeyey in isla maanta lagu qabto magaallo xeebeedka Baraawe.
Koonfur Galbeed ayaa noqotay maamul goboleedka ugu horreeyey ee dhaqan-gelaya deegaan doorashada labaad, taas oo qayb ka aheyd heshiiskii lagu gaaray Muqdisho.
Previous articleBaraawe oo Hoobiyayaal Lagu Garaacay Dhimasho iyo Dhawac ayaa jira.
Next articleKhudbadii Musharraxnimo ayuu Farmajo ka Ujeediyey Shirkii Ururka Midowga Afrika.
(Daawo) Rooble “Ciidamada kama amar qaadan karaan Madaxweynihii hore” Aniga ayeey...
Kooxda Taalibaan ayaa dishay 30 Askari